Bit By Bit - Mifehy - 6.1 Sava lalana
Ny toko teo aloha dia nampiseho fa ny vanim-potoana nomerika vaovao miteraka fahafahana fanangonana sy fandinihina tsara angona ara-tsosialy. Ny taona nomerika ihany koa namorona etika vaovao olana. Ny tanjona toko ity dia ny hanome anao ny fitaovana izay ilainao mba hiatrehana ireo fanamby etika.
Amin'izao fotoana izao ny tsy fahazoana antoka sy ny tsy fitovian-kevitra momba ny fitondran-tena mety ny sasany taona nomerika fikarohana ara-tsosialy. Ity tsy fahazoana antoka no nahatonga ny olana mifandray roa, ny iray izay efa nahazo ny saina bebe kokoa noho ilay teo izy. Etsy andaniny, ny sasany mpikaroka no nampangaina ho nandika ny fiainana manokana olona na sekoly io ireo mpandray anjara amin'ny unethical fanandramana. Ireo toe-javatra-izay aho ao amin'ity toko ity mamaritra-no be dia be ny foto-kevitra ny adihevitra sy fifanakalozan-kevitra. Etsy an-danin'izany, ny etika ihany koa ny tsy fahazoana antoka nanana mifofofofo sy vokany, fisorohana ny etika sy ny fikarohana manan-danja tsy hitranga; ny hoe mihevitra aho fa dia be tsy ankasitrahana. Ohatra, nandritra ny 2014 valan'aretina Ebola, ny fahasalamam-bahoaka manam-pahefana te vaovao momba ny mivezivezy ny olona any amin'ny firenena tena be aretina, mba hanampy hifehy ny valan'aretina. Finday orinasa efa antsipirihany antso rakitsoratra izay mety efa namboatra ny fanazavana izany. Na izany aza, etika sy ara-dalàna ahiahy revo amin'ny an mpikaroka 'ezaka mba handinika ny antontan-kevitra (Wesolowski et al. 2014) . Raha toa isika ka afaka hanana fitsipika etika sy ny fitsipika izay nozarain'i na mpikaroka sy ny vahoaka, ary mihevitra aho fa afaka manao izany isika, dia afaka hitrandrahana ny fahaiza-manao ny nomerika taona amin'ny fomba izay tompon'andraikitra sy mahasoa ny fiaraha-monina.
Misy fahasamihafana eo amin'ny fomba manan-danja ara-tsosialy sy ny angon-drakitra mpahay siansa fikarohana ny mpahay siansa manatona etika. Fa ny mpahay siansa ara-tsosialy, mieritreritra momba ny fitsipi-pitondrantena dia anjakan'ny Institutional Review Boards (IRBs) sy ny fitsipika izay izy ireo nokaramaina tamin'ny fampiharana. Rehefa dinihina tokoa, ny hany fomba ny ankamaroan'ny mpahay siansa ara-tsosialy empirical mahatsapa etika dia amin'ny alalan'ny adihevitra amin'ny fitantànana ara-dingana ny IRB famerenana. Data mpahay siansa, amin'ny lafiny iray hafa, dia manana traikefa kely mitohy amin'ny fikarohana ny fitsipi-pitondrantena satria tsy voaresaka matetika ao amin'ny solosaina siansa sy ny injeniera. Tsy ireo fomba-ny fitsipika ara-fomba ny ara-tsosialy ny mpahay siansa, na ny dokambarotra-hoc fomba ny tahirin-kevitra ny mpahay siansa-tsara ho an'ny fiaraha-monina fikarohana mifanaraka amin'ny vanim-potoana nomerika. Kosa, mino aho fa toy ny maha-fiaraha-monina hanao fandrosoana raha manangana ny fitsipika ara-fomba. Izany hoe, mpikaroka dia tokony handinika ny fikarohana amin'ny alalan'ny fitsipika efa misy, izay haka araka ny nomena ary mieritreritra tokony ho followed- sy amin'ny alalan'ny fitsipika etika ankapobeny kokoa. Izany fitsipika mifototra amin'ny fomba fiasa antoka fa mpikaroka afaka manao fanapahan-kevitra momba ny fikarohana ny antonony izay fitsipika tsy mbola voasoratra ary fa afaka mifandray amin'ny hafa ny Fandresen-dahatra mpikaroka sy ny vahoaka.
Ny fitsipika ara-fomba izay manohana aho Tsy zava-baovao; dia mitaona amin'ny am-polo taona ny fisainana taloha. Rehefa ho hitanao, ao amin'ny toe-javatra sasany ny fitsipika ara-mitondra any amin'ny fomba mazava sy actionable vahaolana. Ary, raha tsy mitondra mankany amin'ny vahaolana toy izany, dia manazava ny varotra-offs anjara, izay zava-dehibe noho ny namono mety tsara mandanjalanja ary ho afaka ny hanazava ny Fandresen-dahatra ny hafa mpikaroka sy ny vahoaka. Koa, araka ny ho hitanao, naka ny fitsipika ara-fomba tsy mitaky tafahoatra habetsahan'ny fotoana. Rehefa mianatra ny fitsipika fototra, dia afaka mampiasa azy ireo mba haingana sy mahomby hieritreritra momba ny isan-karazany ny zava-manahirana. Farany, ireo fitsipika ara-fomba fijery ankapobeny dia ampy izay manantena fa izany dia hanampy na aiza na aiza ny fikarohana atao, na izay miasa (ohatra, oniversite, ny governemanta, ONG, na orinasa).
Ity toko ity dia natao mba hanampiana ny olona tsara fikasa mpikaroka. Ahoana no tokony hieritreritra momba ny fitsipi-pitondrantena lehibe eo amin'ny asa? Inona no azonao atao mba hahatonga ny asa manokana kokoa ny etika? Ao amin'ny Fizarana 6.2, aho dizitaly mamaritra telo taona tetikasa fikarohana izay niteraka adihevitra etika. Avy eo, ao amin'ny Fizarana faha 6.3, saro-takarina aho avy amin'ireo ohatra manokana mba hamaritana ny zavatra Heveriko fa ny antony fototra etika fisalasalana: haingana mitombo hery ny mpikaroka mba hitandrina sy andrana amin'ny olona tsy misy ny fankatoavana na ny fanentanana. Ireo fahaiza-manao no manova haingana kokoa noho ny fenitra, fitsipika, sy ny lalàna. Manaraka, ao amin'ny Fizarana faha 6.4, aho mamaritra efatra misy toro lalana afaka mitarika ny fomba fisainany: Ny fanajana ny olona, ​​Beneficence, Fahamarinana, sy ny fanajana ny lalàna sy ny Public Interest. Avy eo, ao amin'ny Fizarana faha 6.5, aho mamintina ny sakany roa-consequentalism rafitra etika sy ny deontology-izay afaka manampy anao hieritreritra lalina iray amin'ireo fanamby izay mety hiatrika: raha no mety ho anao ny maka fomba mampiahiahy-pahamendrehana mba hahazoana ny -pahamendrehana mety farany. Ireo fitsipika sy etika rafitra dia hanampy anao hifindra mihoatra mifantoka amin'ny zavatra efa misy no navelan'ny amin'ny alalan'ny fitsipika sy hampitombo ny fahaizanao miresaka amin'ny hafa ny Fandresen-dahatra mpikaroka sy ny vahoaka (Sary 6.1). Rehefa heverina izany, ao amin'ny Fizarana faha 6.6, dia hiresaka faritra efatra izay tena sarotra ho an'ny vanim-potoana nomerika mpikaroka ara-tsosialy: nilaza fanekena (sampana 6.6.1), fahiratan-tsaina sy ny fitantanana ny vaovao mety (sampana 6.6.2), fiainana manokana (Fizarana 6.6.3 ), ary ny fanaovana etika fanapahan-kevitra manoloana ny tsy fahazoana antoka (sampana 6.6.4). Farany, ao amin'ny Fizarana faha 6.7, hanatsoaka hevitra aho tamin'ny telo toro-hevitra azo ampiharina ho miasa ao amin'ny faritra amin'ny mitebiteby etika. Ao amin'ny tantara Fanazavana Fanampiny, aho mamaritra ny fivoaran'ny rafitra ny ankehitriny ny fikarohana fitsipika mpiandraikitra any Etazonia anisan'izany ny Tuskegee Fianarana ny tety, ny Belmont Report, ny Common Fitsipika, ary ny Menlo Report.
Sary 6.1: Ny fitsipika mifehy ny fikarohana dia tokony homarinana avy amin'ny fitsipika, izay kosa no homarinana avy amin'ny etika rafitra. Ny tena tohan-kevitra ny amin'ity toko ity dia ny hoe tokony handinika ny mpikaroka amin'ny alalan'ny fikarohana efa misy fitsipika-izay haka araka ny nomena ary mieritreritra tokony ho followed- sy amin'ny alalan'ny fitsipika etika ankapobeny kokoa. Ny Common Rule no napetraka ny fitsipika mifehy amin'izao fotoana izao indrindra federally-vatsian'ny fikarohana ao amin'ny United States (Raha mila fanazavana fanampiny, dia jereo Tovana ara-tantara). Ny fitsipika efatra avy amin'ny roa-kofehy manga kobany izay nitady ny manome tari-dalana ny mpikaroka etika: Ny Belmont Report sy ny Menlo Report (Raha mila fanazavana fanampiny, dia jereo Tovana ara-tantara). Farany, consequentialism sy ny etika deontology dia rafitra izay efa nitombo ny filozofa nandritra ny taonjato maro. Ny fomba haingana sy hiteny ratsy ny manavaka ny rafitra roa dia ny hoe consequentialists hifantoka amin'ny faran'ny sy deontologists hifantoka amin'ny fitaovana.